» २५ होइन १६ मिटर भत्काउने छु : मुख्यमन्त्री पौडेल
२६ श्रावण २०७६, आईतवार १७:५३
२५ होइन १६ मिटर भत्काउने छु : मुख्यमन्त्री पौडेल
वाइपास निर्माणको लागि बजेट विनियोजन
सिधाखबर \_ प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा बजार २५ मिटर नभत्काउने प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन्, । आज हेटौंडामा मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिको चौथो जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले हेटौंडा बजार २५ मिटर नभईन १६ मिटर भत्काउने उनले बताए । चुनावको बेला २५ मिटर भत्काउनु हुन्न भन्दै घोषणापत्रमा नै उल्लेख रहेको थियो ।
उनले राजमार्ग बजारबाट नहुने बाइपासको व्यवस्था गरि १६ मिटर भत्काइ सडक बनाउनुपर्ने बताए । घरभत्काउदा आर्थिक समृद्धि कहाँ पुग्छ ? भन्दै बजार भत्काउन नहुने बताए । राजमार्गको हाइवे बजार क्षेत्रबाट नहुने बताए । सडक विस्तारको विषयमा केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौं, वाइपास बनाएर हाइवे सञ्चालन गरि बजार १६ मिटरमात्र भत्काउने बताए ।
प्रदेश सरकारले वाइपास निर्माणको लागि बजेट समेत छुट्याइएको उनले बताए । केन्द्र सरकारले यो १६ मिटरको विषयको निर्णय गरेको दिन नै मेरो घर भत्काएर कामको सुरु गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । हेटौंडा बजार क्षेत्रको चौकीटोलदेखि पशुपतिनगर सम्म बजार क्षेत्रका घरहरु भत्किदाँ कस्तो होला ? तपाई आफैं कल्पना गर्नुस ।